Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.3 mety
Ny fiheverana amin'ny loharanom-baovaon-drakitra dia tsy dia mampiova loatra ny fanovana fihetsika.
Ny fanamby iray amin'ny fikarohana ara-tsosialy dia ny fahafahan'ny olona manova ny fitondran-tenany rehefa fantany fa notandreman'ny mpikaroka izy ireo. Ny mpahay siansa sosialy dia miantso an'io fihetsika io (Webb et al. 1966) . Ohatra, ny olona dia mety ho malala kokoa amin'ny fandalinana laboratoara noho ny fianarana eny an-tsaha satria tamin'ny voalohany dia fantany tsara fa notandremana izy ireo (Levitt and List 2007a) . Ny lafiny iray amin'ny angona lehibe izay hitan'ny mpikaroka marobe dia ny hoe ny mpandray anjara amin'ny ankapobeny dia tsy mahafantatra fa voasambotra ny angon-dry zareo na efa lasa zatra izany tahiry izany fa tsy manova ny fitondran-tenany intsony. Satria tsy dia mavitrika ireo mpandray anjara, noho izany, loharano maro amin'ny angona lehibe dia azo ampiasaina handinihana ny fitondrantena tsy mbola azo alaina mialoha ny famakiana marina. Ohatra, i Stephens-Davidowitz (2014) nampiasa ny fifehezana ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny fangataham-pikarohana karazana mba handrefesana ny racial animus any amin'ny faritra maro any Etazonia. Ny tsy mavitrika sy ny lehibe (jereo ny fizarana 2.3.1) ny endriky ny tahirim-pikarohana dia nahatonga ireo fepetra mety ho sarotra amin'ny fampiasana fomba hafa, toy ny fanadihadiana.
Ny tsy fampihorohoroana, na izany aza, dia tsy manome antoka fa ireny tahirin-kevitra ireny dia somary miresaka mivantana amin'ny fihetsiky ny olona na ny toe-tsainy. Ohatra, raha nanontany ny mpanadihady iray tao amin'ny resadresaka natao tamin'ny resadresaka, "Tsy hoe tsy manana olana aho, fa tsy mampiditra azy ireo ao amin'ny Facebook" (Newman et al. 2011) . Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia tsy misy adihevitra be aza ny loharanom-baovao maro, dia tsy voatery hisafotofoto ny fitiavan-tanindrazana ara-tsosialy izy ireo, ny fironan'ny olona te haneho ny tena fomba tsara indrindra. Ankoatr'izay, araka izay holazaiko ato aoriana ao amin'ny toko, ny fitondran-tena voasambotra ao amin'ny loharano lehibe dia indraindray misy fiantraikany amin'ny tanjon'ny tompona sehatra, olana iray izay hiantso ny algorithmika mifangaro . Farany, na dia tsy mahomby amin'ny fikarohana aza ny tsy fandehanana miasa, ny fanarahana ny fitondran-tenan'ny olona raha tsy misy ny faneken'izy ireo sy ny fahatsiarovan-tena dia miteraka ahiahy mikasika ny etika izay horesahiko amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko faha-6.
Ireo toetra telo izay nofaritako fotsiny - lehibe, mitohy ary tsy mavitrika - dia amin'ny ankapobeny, saingy tsy voatery foana, mahasoa amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Avy eo, hijery ireo toetra fito an'ny loharanom-baovao lehibe aho-tsy feno, tsy azo idirana, tsy misolo tena, manodinkodina, algorithmika manga, maloto, ary mahatsiaro-izay matetika, saingy tsy voatery hamorona olana ho an'ny fikarohana.